भारतमा बर्ड फ्लू, दक्षिणी नाकामा कडाइ – NepalajaMedia
January 7, 2021 115
काठमाडौं, २३ पुष । करीब १ सातादेखि भारतमा देखिएको बर्ड फ्लू रोगका कारण भारतको विभिन्न राज्यमा हाँस तथा चराहरू मर्न थालेपछि नेपालले सुरक्षा सतर्कताका लागि दक्षिणी नाकामा कडाइ गर्ने भएको छ ।
भारतको उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेशदेखि केरला, इन्दोर, हरियाणालगायत क्षेत्रमा समेत बर्ड प्mलूको ठूलो असर देखिएपछि त्यहाँको संघीय सरकारले संक्रमणलाई थप फैलिन नदिन उच्च सर्तकता अपनाउनुका साथै अल्पकालीन उपायहरू समेत अवलम्बन गर्न थालेको खबरहरू सार्वजनिक भएका छन् ।
Prevदशगजाबाट नेपालीले हटाए भारतीय एसएसबीको पोष्ट !
Nextनयाँ प्रकारकाे कोरोनाले बेलायत अस्तव्यस्त, एकैदिन १ हजार बढीकाे मृत्यु !
बजार मूल्यभन्दा एकदम सस्तो,प्रतिकेजी ४५० रुपैयाँ सस्तोमा खसीको मासु बिक्री।यो ठाउँमा पाइँदै छ सस्तोमा खसीको मासु।
कञ्चनपुर : खैरो हिरोइन र नगदसहित एक युवक पक्राउ